iPhone SE2(aka iPhone 9) : Everything We Know So Far | Net Guide
Home Article iPhone SE2(aka iPhone 9) : Everything We Know So Far
Apple ရဲ့ iPhone 12 ဖုနျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ သတငျးတှဟော ပေါကျကွားပွီးရငျးပေါကျကွား ဖွဈနပေမေယျ့ ဒီဖုနျးဟာ 2020 ခုနှဈအတှကျ ကြူပါတီနိုအခွစေိုကျကုမ်ပဏီက ထှကျလာမယျ့ တဈခုတညျးသောဖုနျး မဟုတျလောကျပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရရငျ မကွာသေးခငျအခြိနျက Apple အနနေဲ့ iPhone SE2ကို iPhone9ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ ထုတျလာမယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ထှကျထားလို့ပါ။ အသဈထှကျလာမယျ့ တနျဖိုးနညျး iPhone သဈဟာ 2020 ခုနှဈအတှငျး အရောငျးစံခြိနျတှတေောငျ တငျနိုငျပါတယျ။ Apple အရေးကြှမျးကငျြသူ Ming-Chi Kuo ကတော့ ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ 2020 ခုနှဈ ပထမနှဈဝကျအတှငျး တနျဖိုးနညျး iPhone SE2ကို ထုတျပေးလာမှာဖွဈတယျလို့ ပွောကွားထားပါတယျ။ Kuo က $ 399 လို့ ပွောထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒါဟာ တနျဖိုးသကျသာတဲ့ ဖုနျးရဲ့စြေးနှုနျးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Apple အနနေဲ့ 2016 ခုနှဈမှာ ကုမ်ပဏီရဲ့ ပထမဆုံးဘတျဂတျြဖုနျးလို့ သတျမှတျနိုငျမယျ့ iPhone SE ကို ထုတျပေးခဲ့ပါတယျ။ အခုထှကျလာမယျဆိုရငျတော့ iPhone9(သို့) iPhone SE2အနနေဲ့ ဖွဈလာမှာပါ။ ကွားထဲမှာ ကာလအပိုငျးအခွား အတျောလေးကှာဟသှားတာကွောငျ့ လုပျဆောငျခကျြပိုငျးနဲ့ ဖုနျးထုတျလုပျမှုပုံစံတှလေညျး ကှဲပွားသှားပါလိမျ့မယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကတော့ အဲ့ဒီဖုနျးထှကျဖို့ သုံးစှဲသူတှကေ အတျောလေး မြှျောလငျ့ခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီနှဈမှာတော့ မြှျောလငျ့မှုတှဟော တကယျပဲ ဖွဈလာတော့မှာပါ။ iPhone9ဒါမှမဟုတျ iPhone SE2ထှကျလာရငျ ဘယျလိုပုံစံမြိုးနဲ့ လာနိုငျလဲ။ ဘယျလိုအခကျြအလကျတှေ ထညျ့သှငျးထားမလဲ။ ဒါတှကေလညျး စိတျဝငျစားစရာ။ ဒီနအေ့ခြိနျထိ iPhone9(သို့) iPhone SE2နဲ့ ပတျသတျတဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြတှကေို ပွနျဝမြှေပေးထားပါတယျ။
iPhone SE2မှာ 5.4 လကျမ မကျြနှာပွငျ ထညျ့သှငျးထားမယျလို့ သတငျးထှကျလာပါတယျ။ 5.4 လကျမကြျောလောကျရှိတဲ့ iPhone 8 နဲ့ မတိမျးမယိမျး ဖွဈလာမှာပါ။ Touch ID ကိုပဲ သုံးထားမှာဖွဈပွီး မကျြနှာပွငျဘေးဘောငျတှကေ ပါးလှာမှာ ဖွဈပါတယျ။ အရငျထှကျခဲ့တဲ့ သတငျးအရ Apple ဟာ iPhone SE2or iPhone9မှာ Samsung အစား LG ရဲ့ LCD Screen ကို အသုံးပွုထားမယျလို့ သိရပါတယျ။ iPhone 8 ကို အခွခေံတညျဆောကျထားမှာဖွဈပွီး မူလ iPhone SE ထကျ ကှေးညှတျတဲ့ဒီဇိုငျး ဖွဈလာမှာပါ။
FILE PHOTO: A man looks at Apple’s new iPhone 8 (L) and his iPhone7at the Apple Store in Tokyo’s Omotesando shopping district, Japan, September 22, 2017. REUTERS/Issei Kato/File Photo
(2). Two Models
ဒဈဂဈြတိုငျးဈကလာတဲ့ သတငျးတှအေရ iPhone SE2ကို ဗားရှငျး2မြိုးနဲ့ ဖွနျ့ခြိလာမယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ ထိုငျဝမျကုနျသှယျရေး သတငျးရငျးမွဈတှပေျေါမှာ အခွခေံထားတဲ့ ဒီအခကျြဟာ မှနျခငျြမှလညျး မှနျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ နောကျထပျ သတငျးတှအေရ Apple အနနေဲ့ 2020 မှာ iPhone အသဈ6မြိုးအထိ စြေးကှကျတငျသှငျးလာနိုငျပွီး4မြိုးကတော့ iPhone 12 စီးရီးတှေ ဖွဈနိုငျကာ2မြိုးကတော့ iPhone SE2မတူညီတဲ့ ဗားရှငျးတှဖွေဈမယျလို့ သိရပါတယျ။ Apple အရေးကြှမျးကငျြသူ Ming-Chi Kuo ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြကိုပဲ ကိုးကားရမယျဆိုရငျ 2020 iPhone တှထေဲမှာ 4.7-inch iPhone SE2၊ 5.4-inch iPhone နဲ့ 6.1-inch iPhones က မျောဒယျ2မြိုး၊ 6.7-inch iPhone ဆိုပွီး အသီးသီးထှကျလာမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။
(3). Headphone Jack
နောကျထပျ စဉျးစားရမှာပါကတော့ မြိုးဆကျသဈဖုနျးမှာ headphone jack ပါလာမလား။ ဖွုတျထားမလားဆိုတာပါ။ ဒီအခကျြတော့ ဖွဈနိုငျခွအေရမျးနညျးပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ apple အနနေဲ့ ပိုကောငျးတဲ့စနဈတဈခုရှာနိုငျမှသာ 3.5 mm headphone jack ကို အစားထိုးနိုငျပါတယျ။
(4). Better Battery
ပိုကောငျးတဲ့ဘကျထရီကို ဒီဖုနျးမှာ မွငျရနိုငျပါတယျ။ စြေးနှုနျးပိုငျးမှာလညျး သကျသာပွီး တဈနကေုနျဘကျထရီခံတဲ့ ဖုနျးမြိုးဆိုရငျ iPhone SE လိုဖုနျးမြိုးက အားရစရာကောငျးလှပါတယျ။ iPhone7နဲ့ iPhone6တှရေဲ့ ဘကျထရီတှေ ကောငျးခဲ့သလို iPhone SE2မှာလညျး ပိုအဆငျ့မွငျ့တဲ့ ဘကျထရီကို ထညျ့ထားမှာဖွဈပွီး စှမျးအငျခြှတောနိုငျစှမျးရှိမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
iPhone SE2မှာ ဆကျသှယျမှုပိုကောငျးတဲ့ Liquid Crystal Polymer (LCP) Antenna တပျဆငျထားမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ သူ့မှာ A13 Chipset နဲ့အတူ RAM ကတော့ 3GB RAM တှေ ထညျ့သှငျးထားနိုငျပွီး 64GB/128GB Storage တှေ ရှေးခယျြနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ iPhone 8 ကို အခွခေံတညျဆောကျထားမှာဖွဈပမေယျ့ 3D Touch အစား Haptic Touch ကို အစားထိုးထားမှာ ဖွဈပါတယျ။ Kuo က Sliver, Red နဲ့ Space Gray အရောငျတှေ ထုတျထားမယျလို့ ပွောထားပါတယျ။
(6). iPhone 11 နဲ့ 11 Pro မှာ သုံးထားတဲ့ ပရိုဆကျဆာပဲ သုံးလာမလား
Bloomberg, Kuo နဲ့ Nikkei Asian Review တို့ရဲ့ အဆိုအရ iPhone SE အသဈမှာ နောကျဆုံးပျေါ A13 Bionic chip ကို သုံးလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ ပထမမြိုးဆကျ iPhone SE တုနျးကတော့ iPhone 6S မှာ သုံးတဲ့ A9 chip သာ ထညျ့သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ။
(7). ဖုနျးအသဈဟာ ဒျေါလာ 400 လောကျ ကုနျကမြယျ
အသဈထှကျလာမယျ့ ဖုနျးအသဈဟာ ဒျေါလာ 400 ဝနျးကငျြလောကျနဲ့ ဝယျယူရနိုငျပွီး iPhone 11 နဲ့ iPhone 11 Pro တို့ထကျ စြေးသကျသာမှာကတော့ အမှနျပါ။ ထိပျတနျး iPhone တှထေကျ ဒျေါလာ 600 ၊ 700 လောကျ စြေးသကျသာမှာပါ။ ဒီစြေးနှုနျးဟာ Google’s ရဲ့ ဒျေါလာ 400 တနျ Pixel 3a နဲ့ iPhone 8 တို့နဲ့ သှားတူနပေါလိမျ့မယျ။ iPhone 8 ကို လကျရှိအခြိနျမှာ ဒျေါလာ 450 နဲ့ ရောငျးခနြပေါတယျ။ စြေးကတော့ iPhone SE264GB ကို $399, 128GB ကို $449 နဲ့ လာမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
(8). Liquid Crystal Display ကိုသာ သုံးမယျ
liquid crystal display ဆိုတာ apple ရဲ့ စြေးနညျးတဲ့ ဖုနျးတှမှော သုံးနတေဲ့ display မြိုး ဖွဈပါတယျ။ iPhone SE2မှာလညျး LCD screen ကို သုံးလာမယျလို့ Nikkei Asian Review က ပွောထားပါတယျ။ သူဟာ high-end iPhones တှမှောပါတဲ့ OLED displays တှနေဲ့ မတူပဲ အနကျရောငျကို တိတိကကြ ပွသပါတယျ။ ဒါဟာ အံ့အားသငျ့စရာကိစ်စတော့ မဟုတျပါဘူး။ OLED screens တှထေကျ ပိုစြေးသကျသာတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ကို စြေးသကျသာတဲ့ iPhone တှဖွေဈတဲ့ iPhone 11 နဲ့ iPhone XR လိုဖုနျးတှမှော သုံးထားတာ တှရေ့မှာပါ။
(9). Apple အဟောငျးတှလေိုမြိုး Touch ID Home Button နဲ့ လာမယျ
Apple အနနေဲ့ သေးငယျပွီး စြေးပေါတဲ့ iPhone မှာ home button အနနေဲ့ Touch ID fingerprint scanner ကိုသာ ပွနျသုံးလာမှာဖွဈတယျလို့ Bloomberg ရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ သိရပါတယျ။ သခြောတာကတော့ သငျ့အနနေဲ့ နောကျဆုံးပျေါ iPhone တှမှောလိုမြိုး မကျြနှာမှတျမိသိရှိမှုစနဈကို ဒီဖုနျးမှာ သုံးလို့မရနိုငျပါဘူး။
Apple ရဲ့ iPhone 12 ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းတွေဟာ ပေါက်ကြားပြီးရင်းပေါက်ကြား ဖြစ်နေပေမယ့် ဒီဖုန်းဟာ 2020 ခုနှစ်အတွက် ကျူပါတီနိုအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီက ထွက်လာမယ့် တစ်ခုတည်းသောဖုန်း မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရရင် မကြာသေးခင်အချိန်က Apple အနေနဲ့ iPhone SE2ကို iPhone9ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ထုတ်လာမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ထားလို့ပါ။ အသစ်ထွက်လာမယ့် တန်ဖိုးနည်း iPhone သစ်ဟာ 2020 ခုနှစ်အတွင်း အရောင်းစံချိန်တွေတောင် တင်နိုင်ပါတယ်။ Apple အရေးကျွမ်းကျင်သူ Ming-Chi Kuo ကတော့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ 2020 ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း တန်ဖိုးနည်း iPhone SE2ကို ထုတ်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။ Kuo က $ 399 လို့ ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါဟာ တန်ဖိုးသက်သာတဲ့ ဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Apple အနေနဲ့ 2016 ခုနှစ်မှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပထမဆုံးဘတ်ဂျတ်ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်မယ့် iPhone SE ကို ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ iPhone9(သို့) iPhone SE2အနေနဲ့ ဖြစ်လာမှာပါ။ ကြားထဲမှာ ကာလအပိုင်းအခြား အတော်လေးကွာဟသွားတာကြောင့် လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်းနဲ့ ဖုန်းထုတ်လုပ်မှုပုံစံတွေလည်း ကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ အဲ့ဒီဖုန်းထွက်ဖို့ သုံးစွဲသူတွေက အတော်လေး မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ မျှော်လင့်မှုတွေဟာ တကယ်ပဲ ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ iPhone9ဒါမှမဟုတ် iPhone SE2ထွက်လာရင် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ လာနိုင်လဲ။ ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ ထည့်သွင်းထားမလဲ။ ဒါတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ။ ဒီနေ့အချိန်ထိ iPhone9(သို့) iPhone SE2နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေကို ပြန်ဝေမျှပေးထားပါတယ်။
iPhone SE2မှာ 5.4 လက်မ မျက်နှာပြင် ထည့်သွင်းထားမယ်လို့ သတင်းထွက်လာပါတယ်။ 5.4 လက်မကျော်လောက်ရှိတဲ့ iPhone 8 နဲ့ မတိမ်းမယိမ်း ဖြစ်လာမှာပါ။ Touch ID ကိုပဲ သုံးထားမှာဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ဘေးဘောင်တွေက ပါးလွှာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ သတင်းအရ Apple ဟာ iPhone SE2or iPhone9မှာ Samsung အစား LG ရဲ့ LCD Screen ကို အသုံးပြုထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ iPhone 8 ကို အခြေခံတည်ဆောက်ထားမှာဖြစ်ပြီး မူလ iPhone SE ထက် ကွေးညွှတ်တဲ့ဒီဇိုင်း ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒစ်ဂျစ်တိုင်းစ်ကလာတဲ့ သတင်းတွေအရ iPhone SE2ကို ဗားရှင်း2မျိုးနဲ့ ဖြန့်ချိလာမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ကုန်သွယ်ရေး သတင်းရင်းမြစ်တွေပေါ်မှာ အခြေခံထားတဲ့ ဒီအချက်ဟာ မှန်ချင်မှလည်း မှန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် သတင်းတွေအရ Apple အနေနဲ့ 2020 မှာ iPhone အသစ်6မျိုးအထိ ဈေးကွက်တင်သွင်းလာနိုင်ပြီး4မျိုးကတော့ iPhone 12 စီးရီးတွေ ဖြစ်နိုင်ကာ2မျိုးကတော့ iPhone SE2မတူညီတဲ့ ဗားရှင်းတွေဖြစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ Apple အရေးကျွမ်းကျင်သူ Ming-Chi Kuo ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်ကိုပဲ ကိုးကားရမယ်ဆိုရင် 2020 iPhone တွေထဲမှာ 4.7-inch iPhone SE2၊ 5.4-inch iPhone နဲ့ 6.1-inch iPhones က မော်ဒယ်2မျိုး၊ 6.7-inch iPhone ဆိုပြီး အသီးသီးထွက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
နောက်ထပ် စဉ်းစားရမှာပါကတော့ မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းမှာ headphone jack ပါလာမလား။ ဖြုတ်ထားမလားဆိုတာပါ။ ဒီအချက်တော့ ဖြစ်နိုင်ခြေအရမ်းနည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် apple အနေနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုရှာနိုင်မှသာ 3.5 mm headphone jack ကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီကို ဒီဖုန်းမှာ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာလည်း သက်သာပြီး တစ်နေကုန်ဘက်ထရီခံတဲ့ ဖုန်းမျိုးဆိုရင် iPhone SE လိုဖုန်းမျိုးက အားရစရာကောင်းလှပါတယ်။ iPhone7နဲ့ iPhone6တွေရဲ့ ဘက်ထရီတွေ ကောင်းခဲ့သလို iPhone SE2မှာလည်း ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ ဘက်ထရီကို ထည့်ထားမှာဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်စွမ်းရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
iPhone SE2မှာ ဆက်သွယ်မှုပိုကောင်းတဲ့ Liquid Crystal Polymer (LCP) Antenna တပ်ဆင်ထားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သူ့မှာ A13 Chipset နဲ့အတူ RAM ကတော့ 3GB RAM တွေ ထည့်သွင်းထားနိုင်ပြီး 64GB/128GB Storage တွေ ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ iPhone 8 ကို အခြေခံတည်ဆောက်ထားမှာဖြစ်ပေမယ့် 3D Touch အစား Haptic Touch ကို အစားထိုးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Kuo က Sliver, Red နဲ့ Space Gray အရောင်တွေ ထုတ်ထားမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
(6). iPhone 11 နဲ့ 11 Pro မှာ သုံးထားတဲ့ ပရိုဆက်ဆာပဲ သုံးလာမလား
Bloomberg, Kuo နဲ့ Nikkei Asian Review တို့ရဲ့ အဆိုအရ iPhone SE အသစ်မှာ နောက်ဆုံးပေါ် A13 Bionic chip ကို သုံးလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပထမမျိုးဆက် iPhone SE တုန်းကတော့ iPhone 6S မှာ သုံးတဲ့ A9 chip သာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
(7). ဖုန်းအသစ်ဟာ ဒေါ်လာ 400 လောက် ကုန်ကျမယ်
အသစ်ထွက်လာမယ့် ဖုန်းအသစ်ဟာ ဒေါ်လာ 400 ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ ဝယ်ယူရနိုင်ပြီး iPhone 11 နဲ့ iPhone 11 Pro တို့ထက် ဈေးသက်သာမှာကတော့ အမှန်ပါ။ ထိပ်တန်း iPhone တွေထက် ဒေါ်လာ 600 ၊ 700 လောက် ဈေးသက်သာမှာပါ။ ဒီဈေးနှုန်းဟာ Google’s ရဲ့ ဒေါ်လာ 400 တန် Pixel 3a နဲ့ iPhone 8 တို့နဲ့ သွားတူနေပါလိမ့်မယ်။ iPhone 8 ကို လက်ရှိအချိန်မှာ ဒေါ်လာ 450 နဲ့ ရောင်းချနေပါတယ်။ ဈေးကတော့ iPhone SE264GB ကို $399, 128GB ကို $449 နဲ့ လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
(8). Liquid Crystal Display ကိုသာ သုံးမယ်
liquid crystal display ဆိုတာ apple ရဲ့ ဈေးနည်းတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ သုံးနေတဲ့ display မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ iPhone SE2မှာလည်း LCD screen ကို သုံးလာမယ်လို့ Nikkei Asian Review က ပြောထားပါတယ်။ သူဟာ high-end iPhones တွေမှာပါတဲ့ OLED displays တွေနဲ့ မတူပဲ အနက်ရောင်ကို တိတိကျကျ ပြသပါတယ်။ ဒါဟာ အံ့အားသင့်စရာကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ OLED screens တွေထက် ပိုဈေးသက်သာတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ဈေးသက်သာတဲ့ iPhone တွေဖြစ်တဲ့ iPhone 11 နဲ့ iPhone XR လိုဖုန်းတွေမှာ သုံးထားတာ တွေ့ရမှာပါ။
(9). Apple အဟောင်းတွေလိုမျိုး Touch ID Home Button နဲ့ လာမယ်
Apple အနေနဲ့ သေးငယ်ပြီး ဈေးပေါတဲ့ iPhone မှာ home button အနေနဲ့ Touch ID fingerprint scanner ကိုသာ ပြန်သုံးလာမှာဖြစ်တယ်လို့ Bloomberg ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သင့်အနေနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone တွေမှာလိုမျိုး မျက်နှာမှတ်မိသိရှိမှုစနစ်ကို ဒီဖုန်းမှာ သုံးလို့မရနိုင်ပါဘူး။
Previous articleMaxell USB 2.0 Memory Stick